Iintlobo zelogo: iintlobo ezahlukeneyo zelogos ezenza uyilo | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 23/04/2022 13:06 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Iimpawu zizinto zegraphic eziye zakhonza ukubeka inkampani ethile kwimarike, iilogos nganye yezi zinto zimelwe enye kwenye kwindawo ethile kwaye inokuba ngeendlela ezahlukeneyo.
Kodwa kule posi, asizanga nje ukuthetha ngezi zinto, kodwa kunoko, yolunye uhlobo lweelogo ezikhoyo. Ukuba ubusoloko uzibuza ukuba ilogo yenziwe ngantoni, okanye zeziphi iimpawu zayo, siya kukucacisela ngokweenkcukacha ngezantsi.
Ukongeza, siza kukubonisa ezinye zeelogo ezilungileyo eziye zehla kwimbali.
1 Logos: zintoni?
1.1.1 Zenzelwe ntoni
1.1.2 Iintlobo ngeentlobo
1.1.4 Ixesha kunye nokusebenza
2.1 iilogo okanye iilogo
3 Imizekelo yeelogo
3.1 ILogo (Coca-Cola)
3.2 I-Isotype (Nike)
3.4 ILogo (Burger King)
I-logotype, ichazwa njengohlobo loyilo lokuchwetheza. Iyinxalenye yoyilo lwegraphic, ingakumbi uyilo lwesazisi okanye ikwabizwa ngokuba yi-branding. Kwicandelo lokuthengisa idijithali likwaziwa kakhulu. Ibonakaliswa ikakhulu ngokuyilwa okanye ukuyilwa ngokusekwe kwimizobo eqhelekile, ngokwesiqhelo, ibe ziifonti okanye ezinye izinto ezibaluleke ngakumbi.
Kananjalo zidla ngokumiselwa ngokuthiywa, oko kukuthi, ukubizwa kuya kunika igama lenkampani okanye iziko elithile eliyilelwe lona uphawu, kwaye iya kukunika ukumelwa okuphezulu ngokwemigaqo yamaxabiso akho kunye nomfanekiso wakho njengenkampani.
Iimpawu ziyindlela ekhawulezayo yokudlulisa umfanekiso othile malunga noko kujongwe ukumela okanye ukubonisa inkampani ethile. Ngamanye amazwi, yindlela egqibeleleyo yokuchaza imiba enje: imveliso yenkampani, amaxabiso aphambili, indlela uphawu oluya kunxibelelana ngayo, oko kukuthi, ithoni yonxibelelwano eya kusetyenziswa, eyona nto iphambili. Iinjongo okanye iinjongo iinqununu zenkampani njl.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zelogo esiza kuzibona apha ngezantsi, nganye kwezi ntlobo zibonakaliswa ngokumelwa ngendlela eyahlukileyo, ke ngoko, kukho iintlobo ezahlukeneyo kakhulu kunye neentlobo ezahlukeneyo eziye zehla kwimbali yophawu njengeyona iphumeleleyo kwimarike.
Yintoni abambalwa abayaziyo malunga neelogo kukuba kwakudala ngaphambi kokuba ibe yilogo, yayingamatywina. kwakukho ixesha elithile apho izinto zegraphic ezibunjwe ngayo ngoku zazingekho, yonke into yayiboniswa ngesandla, ngoko kwakungenakwenzeka ukufumana i-logo eyayifuzisela ngokugqibeleleyo okanye esebenzayo. Ngenxa yesi sizathu, abaninzi abaculi okanye abaqulunqi baqala ukuzibonakalisa ngendlela yemifanekiso baze bafumane ubugcisa bokugqibela.. Kodwa zaziluhlobo oluthile lwamatywina.
Ixesha kunye nokusebenza
Okokugqibela, kufuneka kuqatshelwe ukuba iilogo ziyilwe kwaye zihlengahlengiswe, oko kukuthi, iibrendi ezininzi zikhetha ukuyila kwakhona uphawu oluthile ngenxa yokuba ixesha liphelile, liyekile ukusebenza, okanye ngenxa yokuba imveliso iye yaguquka yaza yatshintsha, okanye ngenxa yokuba imveliso itshintshile. imele abathengi bakho okanye uluntu lwakho alusanele. Ngoko, Phakathi kweempawu ezisisiseko ekufuneka ilogo ibe nazo kukuba kufuneka ihambelane nomgca wexesha okanye ixesha kwaye kufuneka iqhubeke nokusebenza.
iilogo okanye iilogo
Iilogo okanye iilogos ziphawulwa ngokuba luluhlu lwamagama amafutshane angagqithiyo kumagama amathathu abhaliweyo, kwaye akhumbuleka ngokugqibeleleyo kuluntu oluyilelwe lona.
Ngesi sizathu, iilogo zenziwe kwiifonti ezahlukeneyo. Eyona nto ibalaseleyo kunye neyona nto iphambili, kungenxa ye-typography, ekubeni inokwahluka kwaye ummeli ongaphezulu, ungcono.
Zininzi iibrendi ezibheja kuphela kwilogo ukunika bonke ubuso babo obungcono.
I-isotype ibonakaliswa ngokuba luhlobo lwesimboli okanye umboniso apho ezinye zezona nkalo zimele uphawu ziboniswa. Ngamanye amazwi, ukuba siyila ibhrendi yevenkile yezemidlalo, siya kwazisa ezinye izinto ezinomlinganiswa wezemidlalo, onesingqisho kunye nebhalansi ethile.
Le yeyona nto imele i-isotypes, ehlala ilayishwa ngezinto zegraphic, ezibanika ukubonakaliswa okungcono kophawu. Ukongeza, eminye imiba efana nombala weshishini okanye imilinganiselo phakathi kwento kunye nento iyabandakanyeka.
I-imagotype ichazwa njengomanyano olugqibeleleyo phakathi kwelogo kunye ne-isotype. Ngamnye wabo kufuneka amelwe ngendlela ebonisa ngokubonakalayo ukulinganisela okubonakalayo okubonakalayo. Ngokwandayo, iibrendi ezininzi zibheja kolu hlobo loyilo, yiyo loo nto kuthanda ngakumbi uyilo olubonakalayo olulungileyo, olucwangciswe ngokugqibeleleyo kunye nolungelelwaniso.
Ngenxa yoko, imifanekiso zikholisa ukuqiniswa yi-typography elungileyo kunye nokwakheka komzobo olungileyo yenziwe yinto nganye esiyaziyo. Ukongeza, ikwanelungelo elilodwa lomenzi kumanyano lweempawu ukuba kukho inani elikhulu lolu hlobo loyilo kwimarike.
I-isologos lumanyano phakathi kwelogo kunye ne-isotype kodwa ngeli xesha, yenziwe ngamacandelo amabini ahlulwe ngokugqibeleleyo. Ngamanye amazwi, ukuba uthatha isigqibo sokwahlula naliphi na kula malungu, uyilo luya kuyeka ukusebenza. Oku kuthetha ukuba kufuneka kwenziwe kwakhona olu yilo. Yiyo loo nto into nganye engenelelayo kuyilo lwayo yenziwe ngenjongo okanye umsebenzi., akukho nto yenziwa ngamabona-ndenzile kuba kufuneka kubekho isizathu emva kwayo esibonakala kwinkcazo-ntetho yakho. Ukongezelela, kufuneka zilungelelaniswe ngokugqibeleleyo ukuze, kamva, zisetyenziswe, zisetyenziswe ngokuchanekileyo.
Ngamafutshane, kukho ii-brand ezininzi zoyilo ezikhoyo. Njengoko sele sikhankanyile ngaphambili, nganye kwezi ntlobo zohlobo luphawulwa yinyaniso yokuba izalisekisa imisebenzi eyahluke ngokupheleleyo enye kwenye. Into ebalulekileyo kukuba ufunde kwaye wazi ukuba yintoni na nganye kuzo, ukuze kamva wazi ukuba loluphi uhlobo loyilo oluhambelana kakuhle okanye olunokusetyenziswa kuyilo lophawu lwakho.
Okulandelayo, siza kukubonisa ezinye zoyilo lwebhrendi ezilungileyo kakhulu. Ngamnye wabo uquka i-typology eyahlukileyo, ukuze ukwazi ukujonga izinto zayo kunye nemisebenzi ngokweenkcukacha.
Umthombo: IiWallpaper ezigqwesileyo
Uphawu oludumileyo lweziselo ezihlaziyayo zikhethe into esiyaziyo njenge logo, oko kukuthi, uyilo oluqala kuphela ngokuyilwa koyilo lokuchwetheza. Ke ngoko, kuye kwafuneka bagqame kwaye banike ubomi kwilogo besebenzisa i-typography ebaluleke kakhulu. Omnye obonelela nge-dynamism ethile kunye nokunyakaza okufanelekileyo uphawu, ngokusebenzisa le typography kwaye ngokukodwa, ukuyila kwayo, bakwazi ukunika uphawu amandla kunye namandla afanelekileyo. Ukongezelela, umbala walo womlilo uphucula le miba ngakumbi, leyo namhlanje ikwazile ukuba kwiingqondo zabo bonke abathengi bayo.
Enye yeebrendi ezimele kakuhle olu hlobo loyilo ngokungathandabuzekiyo yenye yeefemu ezinkulu zempahla yezemidlalo kwimbali, iNike. Inkampani yagqiba ekubeni ikhethe uyilo olulula, uyilo olugqamayo phakathi kwezinye iibrendi kwaye lunokuchongwa kwezinye. Kwakudala ngaphambi kokuba uphawu lwe-Nike oludumileyo olunophawu kunye nokuchwetheza kwayo, uphawu lwakhetha ukuyilwa kancinci kunye noyilo olulula, apho wasebenzisa kuphela isiqalelo esaziyo namhlanje, uphawu oludumileyo olumnyama.
Umthombo: uRhwebo lweNtengiso
IAmazon, ngoku eyona nkampani inkulu ye-e-package, ikhethe uyilo lophawu olusekwe kwi-imagotype. Kwi-brand yabo sinokubona indlela abakhethe ngayo i-typography eya kubonakalisa uphawu kunye nenkampani. Ukongeza, bongeze i-plus, oku kudityaniswa kumiselwa yigraphic element esebenza njenge icon, uncumo. Olu ncumo lubalasele kububanzi belogo iyonke kwaye lukwabonisa eyona nkalo intle neyintshayo yenkampani kubathengi bayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ilogo eyenzelwe ukunika uphawu oluyimfuneko lwenkampani.
ILogo (Burger King)
Kwaye ukugqiba olu luhlu luncinci lwemizekelo, sikubonisa umzekelo weBurger King, ikhonkco elidumileyo lokutya okukhawulezayo emhlabeni jikelele, ndisebenzisa uyilo oluthi, ekuboneni kuqala, lunikeze yonke ibhalansi kunye ne-dynamism ebonisa imveliso kwiingqondo. yabathengi bazo. Imibala ecacileyo nenomtsalane engahambi ngokungahoywayo kunye ne-typography ekhethekileyo enikezela wonke umlinganiswa odlamkileyo nowonwabisayo. Uyilo olugqibeleleyo oludibanisa ulonwabo kunye nokuvisisana phakathi kwabo badla imihla ngemihla. Ngamafutshane, uyilo olugqibeleleyo, kwimveliso emnandi ngokugqibeleleyo.
Iintlobo ezininzi zeempawu ziye zahlala ixesha elide kwimbali yazo kunye noyilo oluye lwasebenza kwaye lwenzelwe ngokugqibeleleyo ukukhuphisana kwimarike. Xa sithetha ngeelogo, asithethi kuphela ngefonti ethile ebekwe kakuhle kwaye imelwe, kodwa malunga neseti yonke yezinto ezimele ngendlela elungeleleneyo, ezenza uyilo oluhle.
Yiyo loo nto, sinethemba lokuba ufunde ngakumbi malunga nehlabathi leempawu. Ihlabathi elibanzi elizele zizinto ezisenza ihlabathi elizele ngamathuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iindidi zeelogo